Challenge The Good News Paper - Kushaya amai (Shona)
Africa - 86, 2017
Kushaya amai (Shona)
Amai vaDavid Molefe vakashaya aine makore gumi, izvo zvakaita ave nemoyo wokusaregerera uyo akanga apfuudza mai vake nokupindawo muhupenyu hwokupara mhosva.
Paakanga ava namakore gumi nematanhatu iye neshamwari yake vakabata chibharo vasikana vatatu husiku humwe izvo zvakazomupinza mutirongo. Munguva iyi akazadzwa nokuzvisvora pamusoro pezvaakanga aita uye wo nokusvora vamwe nokuda kwezvakanga zvamuwirai zvi.
David anoti "Ndaisazvibata panyaya dzebonde uyedoro, mwengo nokuzvitutumadza ndizvo zvakanga zvosunda hupenyu hwangu; nokuda kwokuzvitutumadza ndato shamwaridzana nemadzimai evanhu pamwe nevamwewo vasikana, nokuti ndaizviona somunhu ari pamusoro pevamwe.
Ava mutirongo David uyo akanga asina kumbobvira aenda kukereke akaona vamwe vachipinda kereke. Iye ndokuitawo gudza mudungwe. David anoti "Jesu Ndakamunzwira mutorongo muno nevanwe vasungwawo seni, pamwe nevafundisi avo vauya muno. Pandakaona kuti Jesu anopa ruponeso kuvasungwa neniwo ndakadawo kuponeswa kubva kuzvivi zvangu. David anorangarira kuti "Musi wa 4 Zvita gore ra 2013, ndakagamuchira Kristu saShe naMuponesi wangu."
David akaverenga bhuku yavaEfeso 5 iyo inotaura pamusoro pezvibereko zvaMweya ichiti; zvibereko zvaMweya waMwari ndirwo rudo, mufaro, rugare, moyo murefu, tsitsi, unaku, unyoro, rutendo nokuzvibata. David akaona zviripachena kuti pakanga pasisina imwe kunze kwekugamuchira Kristu, pakarepo akabva ava muKristu.
Iye zvino David haachazvione ari pamusoro pavamwe, haachina kuzadzwa noruvengo, akatokumbira ruregerero kune vaakatadzira pamwe nekuregerera wo vakamutadzira.
Anoti kuverenga Bhaibheri nokunamata kwamupa kukunda kukuru muupenyu uye ava nerudo rukuru kunavamwe.
David anokurudzira vamwe achiti "Mwari vakanakisa, ndizvo vakatumira Mwanakomana wavo mumwe chete kuzotifira. Mwari oga ndiye anokupa samba rokusiya mabasa akaipa. Unogona kukwanisawo kududzira shoko. Mwari vane hurongwa noupenyu hwako, hurongwa hwakanaka kwete hwakaipa (Jeremiah 29:11). Verenga Shoko!"
"Kurasikirwa nemubereki hazvirevi kuva nherera. Mwari ndivo vachava mubereki wako."
David anoti "Ndakapedzisira ndavakugona kuimba, kuparidza pamwe nokuridza ngoma muboka rinoita zvokuimba. Hakuzi kugona kwangu, ndiMwari vakandida." •
<< Engenanina (Zulu)
Born for something bigger >>